Global Voices teny Malagasy » Iran : Mitokona tsy mihinan-kanina ireo gadra politika · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 11 Aogositra 2010 20:18 GMT 1	 · Mpanoratra Fred Petrossian Nandika Lila
Sokajy: Iràna, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Politika, Zon'olombelona
Gadra politika 17 no nanomboka nitokona tsy nihinan-kanina tamin'ny faran'ny volana jolay hanamelohan'izy ireo ny fitondrana ratsy mihatra aminy ao amin'ny fonjan'ny Evin. Eto ny  lisitra misy ny anaran'ireo mitokona. Iran dia nisambotra mpanao gazety aman-jatony maro, mpitolona ho an'ny zon'olombelona ary mpanao politika nanohitra ny vokam-pifidianana izay ho filoham-pirenena tamin'ny volana jona 2009 .
Mir Hussein Mousavi  sy Mehdi Karoubi , mpitarika ambony ao amin'ny antoko mpanohitra no niantso ireo gadra hampitsahatra ny fitokonany tsy mihinan-kanina. Milaza ireo mpitoraka bilaogy iraniana fa i Babak Bordbar, mpanao gazety mpaka sary nigadra sy nitokona tsy nihinan-kanina no navoaka ny fonja androany.
Sight manoratra  [fa] mikasika ny tsy fitoviana misy eo amin'izao tontolo izao manoloana ireto gadra mitokona tsy mihinan-kanina any Iran ireto. Manoratra ny mpitoraka bilaogy:
23 Khordad, antoko nitaky ny fiforonany taorian'ny fifidianana filoham-pirenena, manohana ny Green Movement (Hetsika Maitso) , milaza [fa] fa:
Arash Ashouri, mpitoraka bilaogy mpaka sary iraniana monina any Iran, manoratra ao amin'ny bilaoginy, Kosoof, mikasika ny anankiray amin'ireto mpitokona tsy mihinan-kanina :
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/08/11/8161/
 nanomboka nitokona tsy nihinan-kanina : http://www.cnn.com/2010/WORLD/meast/08/07/iran.hunger.strike/
 Eto ny: http://persian2english.com/?p=13237
 nanohitra ny vokam-pifidianana izay ho filoham-pirenena tamin'ny volana jona 2009: https://globalvoicesonline.org/specialcoverage/iranian-election-2009/
 no niantso : http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gdng58PFaUh8XsAUQAxe_6WtIsOg
 no navoaka : http://sarbedaranepars.blogsky.com/1389/05/16/post-6/
 mikasika ny anankiray amin'ireto mpitokona tsy mihinan-kanina: http://kosoof.com/